Ungazisebenzisa kanjani izimpawu zedijithali ezitolo zakho zemithi? - Easy Multi Khombisa
Awekho amazwana on How to use digital signage for your drugstore?Posted in I-Digital Signage By ClemPosted on 06 / 05 / 2021 18 / 05 / 2021 Umake amabhodi, I-Digital Signage, izidakamizwa, Pharmacy, ikhemisi, isikrini, izimpawu, isofthiwe, windows
Isikrini ewindini lakho lesitolo
Isikrini enkabeni yesitolo sakho sezidakamizwa.
Isikrini ngaphansi kwekhawunda
Isikrini ngaphezu kwekhawunda
Ubuchwepheshe buya ngokuya bubaluleke kakhulu ezimpilweni zethu futhi lokho kuvamile! Okokuqala, kungabizi kakhulu futhi kufinyeleleka kuwo wonke umuntu. Okwesibili, ubuchwepheshe bonga isikhathi esiningi, kungasekho maphepha, kungabe kusaba khona iphosta yesikhangiso, sekuyi-digital!
Kancane kancane, amabhizinisi ayengelwa ngalobu buchwepheshe obusha futhi kuyaqabukela kuyaqabukela ukubona abasebenza ngothayela, izitolo ezinkulu, abathengisa izimoto noma izitolo zezidakamizwa besebenzisa izikrini ukusakaza imininingwane. Kodwa kungani? Mane nje uthuthukise ulwazi lwamakhasimende.
Kodwa-ke, ngenxa yokuntuleka kogqozi, kungaba nzima ukuthola ukusetshenziswa kwe- izimpawu zedijithali futhi nokho amathuba alobu buchwepheshe acishe angapheli (uma usebenzisa isoftware efanele!). Kulesi sihloko, sikunikeza imibono yokuhlanganisa izimpawu zedijithali kufayela lakho le- izidakamizwa!
Ufuna ukuheha amehlo ekhasimende lakho lesikhathi esizayo? Yini engaba ngcono kunokufaka isikrini ewindini lakho ukuheha amehlo akhe? Uzoma imizuzu embalwa phambi kwewindi lesitolo sakho bese ebuka esikrinini sakho. Kepha yini ongayibonisa kulesi sikrini? Ungakhombisa isimo sezulu bukhoma sedolobha lakho ukwazisa amathemba akho ngesimo sezulu sosuku nesonto.
Gqamisa imikhiqizo yakho ngokubonisa ukukhushulwa kwamanje kwekhemisi yakho ukuvusa ilukuluku lekhasimende. Uma usungaphakathi, ikhasimende lizokwazi ukukutshela ngokwenyuselwa elikubone efasiteleni.
Ungakhombisa futhi isiteshi sezindaba se-TV ukuze ugcine amakhasimende akho esesikhathini nezindaba ezisezweni lakho. Ukukhonjiswa Okulula, ngokwesibonelo, ikuvumela ukuthi ubonise amavidiyo we-YouTube bukhoma noma iziteshi ze-TV.
Isikrini sefasitela lezidakamizwa
Ikhasimende lakho lingaphakathi kwesitolo sakho sezidakamizwa, umatasa ngempela ngoba unamakhasimende amaningi ngakho-ke, awukwazi ukusiza ikhasimende lakho. Kungani ungabonisi kwesinye sezikrini sakho enkabeni yesitolo sakho semithi imininingwane ethile ngemikhiqizo yakho esendalini? Njengengxenye kavithamini noma ezinye izinto?
Ngaphezu kokuthuthukisa ulwazi lwekhasimende lakho, uzokonga isikhathi esiningi futhi ukwazi ukugxila kweminye imisebenzi. Lapho ikhasimende selikubonile ukukhushulwa kwesinye sezikrini sakho, lizoza ngqo kuwe lizolithenga.
Ungafaka futhi isikrini esizokhombisa amakhamera akho okuqapha ukunqanda noma yikuphi ukweba esitolo sakho sezidakamizwa. Ezinye izitolo zikhethe lolu hlelo olusebenza kahle.
Isikrini sangaphakathi sezimpawu zedijithali
Siyazi ukuthi ukweba kungaba yinkinga yangempela kosokhemisi. Siyazi futhi ukuthi abanye osokhemisi bafuna ukuhlala beqonda ngohlelo lwabo lokuqapha. Ngakho-ke kungani ungakhombisi isikrini ngaphansi kwekhawunta yakho ekuvumela ukuthi ubone wonke amakhamera wakho wokuqapha aphile ngasikhathi sinye? Lokhu kuzokuvumela ukuthi uhlale ubheke okwenzekayo esitolo sakho sezidakamizwa.
Sikubonile ukusetshenziswa kwesikrini efasiteleni, maphakathi nekhemisi lakho noma ngaphansi kwekhawunta kepha kuthiwani ngesikrini ngaphezu kwekhawunda lakho?
Muva nje, umhlaba uzivumelanise nenkinga yezempilo ebhekene nayo. Ngakho-ke, sibona izinhlelo eziningi "zamathikithi" emnyango wezitolo zezidakamizwa noma ezinye izitolo ukugwema ukuqoqwa kwabantu ekhawunteni. Kusukela manje kuqhubeke, uthatha ithikithi uma ungena esitolo, bese ubheka into yakho futhi uma usubiziwe uya kokhokhayo ukuyokhokha. Cabanga nje uma ngabe wonke amakhasimende amasha kufanele abizwe ngusokhemisi? Kungaba kubi kubo, ngakho-ke kungani ungafaki isikrini ngaphezu kwekhawunta yakho ukubonisa inani lamathikithi amakhasimende?
Le ndlela isetshenziswa kakhulu futhi ibonakalisile ukusebenza kwayo ngakho kungani ungayisebenzisi?
Nayi eminye imibono engakusiza ukuthi uhlele uhlelo lwakho lwezimpawu zedijithali ekhemisi lakho kepha ngokusobala ungenza njengoba ufisa ngoba amathuba cishe awapheli futhi ungaguquguqula ukubonisa kwakho nezidingo zakho. Ngoba ngaphezu kokusebenziseka kwamakhasimende akho, izimpawu ezidijithali nazo ziwusizo kuwe futhi zizokwenza impilo yakho ibe lula!
Inzuzo yeCVS Yezempilo inyuka cishe i-11% ekuthengisweni kwezitolo zezidakamizwa
Izimpawu zedijithali ikusasa lokuthengisa
Imakethe ye-LCD Digital Signage: Ukuthengisa Okuqinile Kwe-Outlook Phambili | I-LG Electronics, iPhilips, iToshiba